Dassault Falcon ho an'ny P3v4. Altimeter dia tsy miasa.
fanontaniana Dassault Falcon ho an'ny P3v4. Altimeter dia tsy miasa.
2 taona 3 herinandro lasa izay #758 by spilok
Tiako ny Falken'ny Prepar3dv4. Miasa ny zava-drehetra HISOLAKA ny altimeter. Misy vahaolana ve amin'izany?
2 taona 1 herinandro lasa izay #765 by superskullmaster
Mila hanana faharetana kely ianao raha te hanana P3D V4 olana. Misy vintana tsara raha toa ka tsy maintsy raikitra izany, noho izany dia ezahako manolo ny fantsom-pandrefesana amin'ny mpanamory fiaramanidina miaraka amin'ny iray amin'ny fiaramanidina miasa (mihevitra fa mitovy ny habeny).
2 taona 1 herinandro lasa izay #766 by spilok
Miasa indray ny zava-drehetra aorian'ny fametrahana indray. Toa manandrana zavatra aho ka nahatonga fahadisoana vitsivitsy. Ny famerenana indray dia manana ny zavatra rehetra raikitra, ao anatin'izany ny altimeter.
Fotoana mamorona pejy: 0.188 segondra